Tuesday January 22, 2019 - 20:43:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa xarigga looga jaray markaz weyn oo culuumta shareecada islaamka lagu baran doono.
Xafladda xarigga looga jarayay Markazka haweenka Ceelbuur waxaa ka qeyb galay mas'uuliyiin katirsan wilaayada islaamiga Galguduud iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada iyo deegaannada hoos yimaad.
Markazka oo loogu magac daray Al-irshaad wuxuu gaar u yahay haweenka ku dhaqan magaalada Ceelbuur iyo deegaannada hoos yimaad, dhismaha markazka oo si heer sare ah loo dhisay waxaa ku baxay lacag labaatameeyo kun oo dollar ah.
Mas'uuliyiintii kalimadaha ka jeediyay munaasabadda ayaa ballan qaaday in macallimiin aqoontoodu sarrayso ay wax ka dhigi doonaan markazka cusub ee Al-irshaad.
Magaalada Ceelbuur oo ku dhowaad laba sanadood ka hor laga xureeyay ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa umuuqata mid si tartiib tartiib ugasoo kabsanaysa dhibaatadii kasoo gaartay gummeysigii Xabashida.